Umshuwalense Wezasolwandle Nezingozi e-United Arab Emirates - Umthetho Firms Dubai
Ifa & Khetha
Icala Lokwenza Imali
Ukubulawa Ngengozi noma Ukubulawa Ngengozi
Ingozi Yezithuthuthu noma Yesithuthuthu
Umthetho Wezamabhizinisi / Ukuxazulula Izingxabano
Umshwalense WaseMarine Nezingozi e-United Arab Emirates
1 Comment / Blog, amacala enkantolo, amafemu omthetho e-dubai, Ukulimala komuntu siqu / By Sarah
Umshuwalense wemikhumbi kanye nezingozi e Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Noma yimuphi umshwalense uhloselwe ukubhekela ingozi uma kwenzeka izigameko ezimbi njengengozi emzimbeni nasesimweni, engozini noma ekufeni. Ngokuphathelene neMikhumbi, izigxobo ziphakeme njengoba zonke izingxenye zibandakanya lo msebenzi. Isibonelo, ingozi yokulahlekelwa imithwalo enenzuzo noma imikhumbi ephakeme kakhulu, ingozi yomonakalo emhlabeni ngenxa yokungcola kwamafutha kanye nengozi yokulahlekelwa yizinto eziyigugu zabadobi ngenxa yengozi.
Ukuqinisekisa ukuthi zonke izingozi zingabhekwa ngaphandle kokungabikho kwezimpahla ezihlobene nemali uma kudingeka, izimali zokungcebeleka eziMaritime ezingavamile zenziwa ezidingekayo ezikebheni kanye nabanikazi bokuthumela umkhumbi. Mane ubeke lokho, umshuwalense ungenziwa ngemikhumbi. Izinhlobo zemishuwalense yasolwandle efinyeleleka ekuzuzeni ikhasimende ziningi futhi zonke zazo zifinyeleleka ngendlela yabo ethize.
Ukuze kuvunyelwe emachwebeni amakhulu e-UAE, umkhumbi kumele ube ne-app kanye nethemba lokuqinisekisa nokubuyisela imali. Izinga lezinga alilaywanga futhi libophezele ekuqondeni kwamapayipi.
Kunezimbambiso ezimbalwa zasolwandle kanye nezinhlobo zengozi ezihlinzeka izinhlobo zokuvikelwa kumnikazi wokuthumela, abaphathi bezimpahla nabaphathi bezinkampani.
Ukuzithoba kuyilungelo lomshwalense okhokhisiwe ngokuqinisekisiwe, ukuhlala ezicathulweni eziqinisekisiwe kanye nokumangalelwa kumuntu wesithathu onokwethenjelwa. Isiqinisekiso sokuthola inkokhelo emakhakheni avuselelwe akuqedi ilungelo lokuqinisekisa ukufakazela kubantu besithathu mayelana nokulahlekelwa.
Ngokumiswa phansi, noma yikuphi ukuvuselelwa okwenziwe kuwuzuzisa umnikezeli wenetha lokuphepha, noma kunjalo kuze kube sezingeni lokubuyisela okunikeziwe. Ilungelo lomshuwalense ngaphansi komthetho we-UAE linikezwe i-Article 1030 yeCC.
Imikhawulo ngakwesokudla sokuxoshwa
Umshwalense akakwazi ukuphinda abuyele ngaphezu kwesilinganiso sokubuyiselwa okukhokhelwe. Uma kwenzeka ukuthi umhlinzeki wenethiwekhi yokuphepha aqoqe ngaphezulu, kufanele akhokhwe kuqinisekisiwe.
Amalungelo omshuwalense awawena obanzi kunalawo aqinisekisiwe. Isibonelo, uma isivumelwano sesiqinisekiso nesithathu esithembekile kumuntu wesithathu, imingcele enjalo isebenza kumhlinzeki wenethiwekhi yokuphepha.
Njengesihloko ngasinye se-Article 1030 se-Civil Code, uhlelo lokusekela alukwazi ukuletha isimemezelo esingaphansi kwe-ascendant noma isizukulwane seqinisekisiwe, noma umuntu okuqinisekisiwe ukuthi uyakwazi.
Indlela i-Article 1030 ebhalwe ngayo yiyo wonke ama-akhawunti aqondiswe kumuntu oqinisekisiwe, esikhundleni se-element element.
Isigameko seManzini ikakhulukazi ukushayisana nokungcola e-UAE
Izingxabano zilawulwa yizihloko ze-318 kuya kwi-326 yoMthetho wezokuThuthukiswa koLwandle. Lezi zinkundla zifana nezesiXhumano se-Collision 1910.
I-United Arab Emirates iye yavuma ngokwengeziwe iMithethonqubo Yomhlaba Wonke Yokuvimbela Izingxabano e-Sea 1972.
Okunye ukulimala kwemvelo okubangelwa umkhumbi
Isimo somkhumbi sivikelekile yi-Federal Law on the Protection and Development of Environment (24 / 1999).
Zonke iziqukathi ezifaka izifunda zasolwandle zase-UAE kumele zibe neSitifiketi Sokulindela Ukungcoliswa Kwamafutha Emhlabeni Wonke futhi kufanele iqhubeke nesimemezelo esichaza usuku nendawo lapho i-muck ichithiwe khona.
Noma ngubani olimaza isimo sezilwandle ngokungenakunqunyiwe noma ngokungahambisani noMthetho 24 / 1999 uphethe izindleko zokwelapha noma ukukhishwa kwezisulu kanye nemiphumela elandelayo.
Ukuphulwa koMthetho 24 / 1999 kungaletha izinkokhelo kuze kufike ku-Dh500, i-000 kuze kube yiminyaka emihlanu yokuboshwa.
I-United Arab Emirates iqoqa ngokufanayo kuma-Annexes I kuya ku-V we-International Convention for the Prevention of Pollution kusukela eMikhumbi.
I-UAE yamukele iSivumelwano Samazwe ngamazwe ngeSalvage 1989 kuwo wonke ama-1993. Ukukhululwa kulawulwa ngokungeziwe yizihloko ze-327 kuya ku-339 yoMthetho Wezokuhweba Maritime.
Ngaphansi kwe-Article 8 yoMthetho Wezokuhweba Ngezokuhweba, iSivumelwano Samazwe ngamazwe ngeSalvage 1989 sinqoba lapho imibuso emibili iphikisana khona.
Ilungelo lokuthola isinxephezelo sokusindiswa okuphumelelayo akumele liqinisekiswe ngokusemthethweni.
Ayikho isinxephezelo esikhokhwa ukuthuthwa okuvamile noma ukushayela noma ukugwema abantu.
Ngaphezu kwalokho, ayikho ilungelo lokuthola isinxephezelo uma isitsha esilondoloziwe siphika usizo ngezizathu ezizwakalayo.
Isilinganiso senxephezelo silawulwa yinkantolo enekhono, uma singavunyelwanga yizinhlangothi.
Yiziphi izindinganiso namasu okusebenzayo okusebenzayo ekuphumeni kwamaphutha ezindaweni zakho?
I-UAE ayiyona ingxenye emhlanganweni weNairobi Wreck Removal Convention 2007 futhi ukukhishwa kwezingcingo akulawulwa ngokucacile umthetho we-UAE.
Ngaphansi kwaziphi izimo ingabe ochwepheshe bangalawula ukuxoshwa kokubhujiswa?
Ayikho isiqondiso esakhelwe ukuxoshwa kwamaphutha, nokho ochwepheshe bazovunyelwa ukuthi bavunyelwe ukufaka amandla okuphuma kwamaphutha.
Umshwalense weMarine nezingozi zizolahleka noma ukulimala imikhiqizo yakho ngenkathi uhamba nge-air, emgwaqweni nasolwandle. Ama-inshuwalense anganikeza amalungiselelo afanelekayo e-Marine Cargo ukuxhumanisa ibhizinisi lakho elithile. Ngalokhu bangakwazi ukwenza kahle ukuthengwa kwempahla yonyaka ekuvikelweni kweTransitter okuyinto ezoba nengqondo kubantu abanokuthuthukiswa okujwayelekile nokungapheli kwemikhiqizo e-UAE.
Kunezinhlobonhlobo zokusabalalisa ukubheka ngokuthembela emcabangweni womthwalo. Okokugcina, kuhluke ukusabalala okujwayelekile kuya kwezinye ukusabalalisa okwenziwe ngendlela efanele ukuze kuhambisane nezidingo ezahlukene zamakhasimende ethu.
Umcabango o-1 ku "Umshuwalense Wasolwandle Nezingozi e-United Arab Emirates"
Meyi 7, 2019 at 6: 31 am
Ukushayisana kubeka engxenyeni enkulu yezingozi zasolwandle futhi kuvame ukwenzeka ngenxa yokushayeka komunye umkhumbi wamanzi (wehlela phansi) noma into esisaqhubeka. Ukushayisana okunjalo kungahlobene nemikhumbi yokuzijabulisa efana nezikebhe nezikebhe noma imikhumbi yokuhweba efana nemikhumbi yokuhamba nemikhumbi ethwala izimpahla.
SamaCasеs оf Cоmmеrсіаl Lіtіgаtіоn futhi Dіsрutе Rеsоlutіоns
Izinketho ezine zeNkantolo yokuHlanyiswa kwezeMpilo e-UAE
Izimo Zokunganaki Kwezokwelapha - Yazi Amalungelo Asemthethweni Asemqoka!
Izinkantolo ze-UAE, i-DIFC, ukuhanjiswa kwezixazululo ezingxabano ku-UAE
Iseluleko sezomthetho sibalulekile uma sifika emibhizinisini yebhizinisi e Dubai, e-UAE
Nelly Banisaied on Abameli bokufuduka
i-Legalbridge-admin on Kwenzekani uma ungabuyiseli imali yokubolekwa kwemali mboleko noma i-credit card e-UAE?
Chandrmohan on Kwenzekani uma ungabuyiseli imali yokubolekwa kwemali mboleko noma i-credit card e-UAE?
UZamira on Kufanele Ngithole Ummeli Uma I-Credit Card Company Files A Case On Me?
UTeresa Rose Co on Indlela Yokukhulisa Izimangalo Zobungozi Bokuzilimaza Komuntu E-Dubai noma e-United Arab Emirates?
Ukulimala komuntu siqu
Imithetho ye-Visa neMithetho
IGulf Towers, Oud Metha, Eduze Dubai Healthcare City, Dubai, United Arab Emirates
Copyright © 2020 Law Firms Dubai | Inikezwe amandla yi Ezokuxhumana Copper
Disclaimer | Inqubomgomo yobumfihlo